सासू र बुहारीबीच किन ठाकठुक पर्छ ? – Khabar Silo
सासू र बुहारीबीच किन ठाकठुक पर्छ ?
Posted on October 6, 2019 Author admin Comment(0)
अधिकांश मानिस सबभन्दा राम्रो मानिससँग भेट्न र सबभन्दा राम्रो काम गर्न चाहन्छन् ।प्रत्येक पुरुष र नारीले आफ्ना लागि आदर्श जीवनसाथीको इच्छा राखेका हुन्छन् । तर वास्तविकता के हो भने संसारमा कोही पनि आदर्श हुँदैन । तपाईंले भगवानसँग बिहे गर्नुभयो भने पनि केही न केही गुनासो गर्नुहुनेछ ।
बिहे गरेपछि आमालाई खुशी गराउने कुरा गर्दा के बुझ्नुपर्छ भने आमाले आफूले जन्माएको सन्तानमा अधिकार खोज्छिन् । उनलाई आफ्नो सन्तान अरूसँग बाँड्न राम्रो लाग्दैन ।
प्रजननका क्रममा र सन्तान जन्माइसकेपछि पनि नारीमा सन्तानप्रति सुरक्षाको भावना प्रबल हुन्छ । त्यसैले गर्दा उनी अर्को नारीप्रति झट्ट विश्वास गरिहाल्न सक्दिनन् ।
अनि बुहारीको कुरा गर्दा उनी बिहेअघिको जिन्दगी पूरै अर्कै घरमा बिताएर आएकी हुन्छिन् । आफूलाई जन्म दिने आमाप्रतिको ममताको छायाँबाट छुट्टिएर उनी श्रीमानको आमाको निरीक्षणमा आइपुग्छिन् । उनलाई केही असहजता त हुन्छ नै र अलिक तीखो वचन प–यो भने ठाकठुकको स्थिति आइहाल्छ ।
सासू बुहारीको सम्बन्धका बारेमा एउटा रोचक कथा पाइन्छ । एकचोटि एउटा परिवारको युवक बिहे गर्ने तरखरमा थियो । उसले आमालाई आफू एक केटीलाई मन पराउने बतायो र केटीलाई घरमा देखाउनका लागि अनुमति माग्यो ।
ऊ आमाको आशीर्वाद लिन चाहन्थ्यो र स्वीकृति पनि । पछि गएर झगडा नहोस् भन्ने उसको उद्देश्य थियो । ऊ आफ्नी आमालाई धेरै मन पराउँथ्यो र उसले एक परीक्षण गर्ने योजना बनायो ।
एकदिन उसले आफ्नी केटी साथीका साथ अरू तीन युवतीलाई पनि घरमा ल्यायो । उनीहरू त्यहाँ डिनर गर्ने योजनामा थिए । आमाले आफ्नो वास्तविक गर्लफ्रेन्ड पत्ता लगाउन सक्लिन् कि भनी ऊ परीक्षण गरिरहेको थियो ।
त्यसैले ऊ सबै केटीहरूसँग बराबर दर्जामा कुरा गरिरहेको थियो । गर्लफ्रेन्डलाई उसले विशेष भाउ दिएको थिएन ।
पछि सबै गएपछि उसले आमालाई सोध्यो, ‘तपाईंले मेरो गर्लफ्रेन्ड चिन्नुभो त ?’
उनले जवाफ दिइन्, ‘मैले थाहा पाएँ । उसले रातो कपडा लगाएकी थिई ।’
त्यसपछि छोरोले भन्यो, ‘तपाईंले कसरी थाहा पाउनुभयो ? मैले त उसलाई हेरेको पनि थिइनँ । तपाईंले थाहा नपाउनुहोस् भनेर म त जतिखेर पनि अरू केटीहरूलाई हेरिरहेको थिएँ ।’
आमाले भनिन्, ‘ऊ भित्र आउनेबित्तिकै मलाई पटक्कै मन परिन । त्यसैले ऊ नै तिम्रो गर्लफ्रेन्ड हो जस्तो मलाई लाग्यो ।’
Posted on December 6, 2020 Author khabar silo
हिन्दू धर्मअनुसार आइतबार सूर्यदेवको बार मानिन्छ । सूर्यदेवबाट प्रकाश, आरोग्य, प्रतिष्ठा प्राप्त हुने छ भने दुष्टहरुको निवारण हुनेछ । नवग्रह शान्ति विधानमा मात्र सूर्योपासनाबाट सबै ग्रहको शान्ति मिल्ने उल्लेख छ । किन भने सूर्यदेवलाई नौ ग्रहको मुख्य ग्रह अर्थात राजा मानिन्छ । तपाईंले जीवनमा कुनै तनाव झेलिरहनु भएको छ भने सूर्यदेवलाई प्रसन्न पारेर आफ्नो सबै […]
Posted on December 11, 2020 Author khabar silo
कोही व्यक्ति शान्त र धैर्य स्वभावका हुन्छन् भने त्यस्तै प्रकारले कोही हरेक कुरामा आफ्नो रिस देखाउनमा माहिर हुन्छन् । यस्तै प्रकारले ज्यादा व्यक्ति पैसा सम्हाल्न त कोही हाई लाइफ स्टाइल जिउन मनपराउँछन् ।यी ६ राशिका महिलाहरु निक्कै खर्चालु स्वभावकी हुन्छन् !वृष राशि:यो राशि भएका महिलाहरुलाई महंगो चिज,कपडा,जुत्ता आदिहरु किन्नमा एकदमै रुचि राख्दछन् । यसमा यि […]
साउनमा यसरी गर्नुहोस् भगवान शिवको अभिषेक
Posted on July 24, 2020 Author khabar silo
काठमाडौ- हिन्दू धर्ममा साउन महिनामा भगवान शिव व्रत बसेर पूजा आराधना गर्दा मनोकामना पूरा हुने धार्मिक विश्वास छ। धार्मिक पुराणका अनुसार अन्य दिनको तुलनामा साउन महिनामा भगवान शिवको पूजा आराधना गर्दा दुई गुणा लाभ मिल्ने गर्दछ। भगवान शिवलाई प्रसन्न बनाउनका लागि भक्तजनले शिवलिंगमा फूल र प्रसाद चढाउने गर्दछन्। शास्त्रमा भगवान शिवलाई प्रसन्न बनाउनका लागि केही […]
बलिउड सेलिब्रिटीहरुका छोरीहरु जसले आफ्नो करिअर फिल्मी अभिनयमा देखेनन्
बिहानै मनकामना मन्दिरको दर्शन गरि तपाइको आजको तपाइको राशिफल हेर्नुहोस
राज कुन्द्रा प्रकरण : ह्वाट्स एपसँगै अन्य ४ ‘एडल्ट एप्स’ चलाउँथे राज, दैनिक कमाई १० लाख
इजरायलमा ‘केयरगिभर’का लागि आवेदन खुल्यो, मासिक कमाइ झन्डै दुई लाख
जीवनमा आइपरेका संकट हटाउन कुन राशिका व्यक्तिले के गर्दा संकट हट्छ के गर्ने ?
इटहरीमा आमा संग बिबाह गरे, ९ बर्षकी छोरी माथी यौ’न ‘दु’व्र्य’बहार, शसत्रका सइ रुदै आए